iHeartRadio hadda waxay taageertaa CarPlay | Waxaan ka socdaa mac
Tan iyo markii si rasmi ah loo soo saaray bishii Juun 2014, tiknoolajiyada 'CarPlay', oo noo oggolaaneysa inaan si toos ah uga xakameynno iPhone-keena xarunta dhexe ee baabuurkeenna, ayaa noqoneeysa a waa in ay leeyihiin dhammaan kuwa isticmaala alaabada Apple ee doonaya inay ku raaxaystaan ​​waxyaabaha ku jira iPhone-kooda, adigoon jir ahaan taaban, iska ilaalinta waxyaabaha ku mashquulinaya giraangirta gadaasheeda.
CarPlay hadda waa ikhtiyaari inta badan soosaarayaasha adduunka oo dhan, maantana, tirada codsiyada ama adeegyada la heli karo weli aad bay u yar yihiin, in kasta oo ay jiraan faa'iidooyin iyo raaxo ay na siiso. Adeeggii ugu dambeeyay ee sharad ku sameeya tikniyoolajiyaddan waa iHeartRadio.
Codsiga iHeartRadio wuxuu na siinayaa saddex qaybood oo kala duwan: Mawduucyada Podcast, qayb aan marin u leenahay ilaa 18 qaybood oo aan ka helno majaajillo, muusig, ciyaaro, saynis iyo teknolojiyad ... Waxaan sidoo kale helnaa qayb la yiraahdo Podcast-keena, halkaas oo aan marin ugu leenahay boodhadhka aan horey ugu soo dejinay qalabka. Ugu dambeyntiina, qeybta saddexaad ayaa loo yaqaan Sii wad ciyaarida, kaas oo aan ku sii wadi karno ciyaarida feylkii ugu dambeeyay ee aan dhageysaneynay markii aan jareynay arjiga, ama markaan gaariga damineyno ama aan joojinayno.
Haddii waxa aan jecel nahay ay yihiin podcasts, iyada oo loo marayo CarPlay waxaan helnaa barnaamijyo kale oo la jaan qaada tiknoolajiyaddan sida Toddobaadka ama Duufaanta caanka ah, mid ka mid ah codsiyada ugufiican ee lagu dhagaysto barnaamijka aan jecel nahay, taasina waxay na siisaa tiro badan oo xulashooyin ah oo aan laga heli karin inta badan ciyaartooyda noocaan ah.
iHearRadio waa xarun internet oo la aasaasay sanadkii 2008 taasoo na siisa waxyaabo ka badan 800 oo saldhig maxalli ah oo ku yaal Mareykanka iyo sidoo kale warbaahinta sida Bloomberg. Hadda waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu isticmaalka badan gudaha iyo dibedda Mareykanka in lagu ogeysiiyo waqti kasta nooc kasta oo warar ah, iyada oo ay ugu wacan tahay hawlgalkeeda internetka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » iHeartRadio hadda waxay taageertaa CarPlay
Muxuu awood u leeyahay USB-C HUBkan loogu talagalay MacBook. Weligaa lama arag!